Bvisa.bg: Bvisa Mifananidzo Yemukati kubva kuHeadshots, Vanhu, uye Zvinhu zvisina Ruregerero neAI | Martech Zone
Kana usiri kutevera Joel Comm, zviite. Zvino. Joel ndechimwe chezvinhu zvandaifarira zvehunyanzvi. Iye akajeka, akatendeseka, uye anoshamisa kujekesa. Hapana zuva rinopfuura iro ini ndisiri kutarisa kune izvo zvaakawana zvinotevera… uye nhasi chaive chihombe!
Joel ita kuti munhu wese azive nezve chishandiso chitsva pamhepo, bvisa.bg. Chishandiso chinoshandisa huchenjeri hwekugadzira kuongorora mifananidzo nevanhu uye zvobva zvanyatso bvisa kumashure.
Kana iwe wakamboedza kuita ne Photoshop, iwe unoziva icho chinotyisa chiitiko icho. Kunyangwe pa Photoshop eraser sarudzo, uye kunyange yavo chishamiso sarudzo, ivo havatombo svika padhuze. Kuona rakakura Photoshop mushandisi kudzima kumashure kwakashamisa kunoshamisa.
Ini handisi kuzokupa iwe dzidziso yekuti sei nekuti ini ndinovimba kuti haumbofi, zvachose, zvachose, wakamboshandisa iko kushanda zvakare. Heano muyedzo wandichangobva kuisa kuti ndibvise.bg. Ini ndaida kunyatso kupa iyo yakanaka bvunzo - hapana padyo-kumusoro uye yakawanda yemashure ruzivo.
Bvisa iyo Mbiri kubva paPikicha reGurupu reVanhu
Uye heano mhedzisiro inoshamisa:
Injini yakatobvisa bhasikoro! Mufananidzo wakashandurwa wakagadzirisa zvakare saizi uye margins kuti iise mukati memufananidzo zvichitenderera uye yakatwasuka. Zvinoshamisa chete!
Bvisa iyo Nongedzo kubva kuHotshot
Bvisa iyo Mbiri kubva kuRogo kana chimwe Chinhu
apo Remove.bg yakatanga kugadzirirwa kubvisa mabhureki kubva mumusoro uye vanhu, ivo vakachinja maalgorithms avo kuti iwe ugone kurodha chero chero mufananidzo kune sevhisi uye ichabvisa zvakachena kumashure. Ndakaishandisa kakati wandei pane izvi uye zvakashanda zvakanakisa!
Bvisa Photo Background Zvishandiso & API
Chidimbu chepamhepo chekubvisa kumashure - Yakakwana kune imwechete mufananidzo kugadzirisa uye kuyedza usati wamhanya batch, iyo Remove.bg webhusaiti ndiyo nzira iri mukati mevazhinji vashanyi. Uye kuongorora mifananidzo kunogara kusununguka! Pano iwe zvakare uchawana iyo mupepeti iyo inoita kuti iwe uchinje iyo yekumashure ruvara kana mufananidzo.
Desktop Chishandiso Kubvisa Nharaunda - Iyo desktop desktop ye remove.bg yeWindows, Mac, kana Linux inokupa kutonga kwakawanda. Semuenzaniso, unogona kusarudza iyo inobuda fomati. Iyo zvakare yakakosha kune batch kugadzirisa zviuru nezviuru zvemifananidzo imwe mushure meimwe: yakanaka kana iwe uri kutengesa online kana kushanda pamwe nemushandisi-inogadzirwa zvemukati.
Photoshop Kuwedzeredza kuti ubvise Nharaunda - Kuzvitsanangudza! Bvisa mifananidzo kubva mukati mekuenda-kumifananidzo yekugadzirisa software usinga fanike kutenderedza nematuru akavakirwa. Chero chekacheka chinoitwa muKuwedzeredzwa chinouya neyakagadziriswa masiki masiki ekugadzirisa kuwedzeredzwa.
API yekubvisa Mifananidzo kumashure - Iyo API ndiyo inogadzirisika mhinduro yatinopa. Iwe unogona kusanganisa iyo yakawedzeredzwa yekugadzirisa kuti uwane izere kutonga pane kuburitsa uye batch kugadzirisa mukati mune chero chero kufambiswa kwebasa Uye nharaunda yedu yatogadzira inonakidza renji yemapulagi akagadzirwa eFigma, WooCommerce, Sketch, uye Visual Studio Code.
Mitengo yemitengo inosanganisira kunyorera zvirongwa uye kubhadhara sezvaunoenda.
Edza Bvisa.bg Zvino!
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ye Remove.bg munyaya ino.
Tags: aiAndroid app bvisa mufananidzo kumashureAPIchakagadzirwa njeredrupalfigmaLinuxPhotoshopPhotoshop kuwedzerabvisa kumashurebvisa kumashure apibvisa musoro wepashurebvisa mufananidzo kumashurebvisa logo kumashurebvisa vanhu kumashurebvisa.bgSketchmahwindowoocommerce